Gmail dia mampiditra maody maizina amin'ny beta vaovao | Androidsis
Azonao atao izao ny mizaha ny maody maizina amin'ny fampiharana Gmail
Eder Ferreno | | Fampiharana Android
Gmail dia efa namela antsika hanana fampiasa vaovao maro hatreto amin'ity taona ity. Ny fangatahana dia nanolotra ny fomba tsiambaratelo, ankoatry ny fampidirana ny mety ho fandefasana fandaharam-potoana avy amin'ny mailaka. Ankehitriny, mamela antsika zava-baovao iray hafa tena mahaliana izy ireo, izay fampidirana ny maody maizina amin'ny fampiharana. Fomba iray efa tonga ao amin'ny APK-ny.
Volana vitsivitsy lasa izay dia voalaza fa Gmail dia hampiditra maody maizina amin'ny Android. Na dia tsy mbola teo aza izao rehefa nahalala bebe kokoa momba an'io fomba io amin'ny fampiharana isika. Ity fomba ity dia efa sedraina amin'ny fampiharana, ka afaka manantena isika fa ho ofisialy tsy ho ela.
Fampiharana Google maro no nampiditra an'io fomba io tato anatin'ny volana vitsivitsy. Noho izany, anjaran'ny Gmail izao no manana an'ity endri-javatra ity, izay mahazo vahana amin'ny Android. Amin'izao fotoana izao dia zavatra azo zahana amin'ny beta vaovao, na dia mbola tsy misy daty aza ny fandefasana azy.
Amin'ity maody maizina ity no ahitantsika izany mivadika volondavenona ny interface tsara amin'ny fampiharana. Ary koa amin'ny menus options ao anatin'ny fampiharana dia mihatra ihany izany. Na dia tsy hita amin'izao fotoana izao aza ny fomba hanehoana ny boaty inbox miaraka amin'ny maody maizina.
Tsy isalasalana fa fomba iray mety hahaliana ny mpampiasa maro ao amin'ny Gmail io. Ireo telefaona ireo ihany manana fidirana amin'ny beta vaovao an'ny Android Q afaka izy ireo. Ka voafetra ny isan'ny mpampiasa izay efa afaka manandrana io maizina io amin'ny fampiharana mailaka malaza indrindra eny an-tsena.
Azo antoka fa hitombo mandritra ny volana maro. Na dia tsy mbola mahalala na inona na inona momba ny fandefasana ofisialy an'ity maizina maody Gmail ity izahay. Noho izany dia mila miandry ny hanomezan'i Google vaovao misimisy kokoa momba ny fampidirana an'io asa io isika. Farafaharatsiny mba efa fantatsika fa efa an-dàlana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Azonao atao izao ny mizaha ny maody maizina amin'ny fampiharana Gmail
Ny Kirin 810 dia mandresy ny Snapdragon 855, Kirin 980 ary chipset hafa ao AI noho ny NPU bibidia.